Nieves Muñoz। शान्त लडाईहरु को लेखक संग साक्षात्कार वर्तमान साहित्य
Nieves Muñoz। मौन लडाईहरु को लेखक संग साक्षात्कार
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | 21/09/2021 12:00 | साक्षात्कार, लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला
फोटोग्राफी: Nieves Muñoz, Edhasa प्रकाशन घर को लेखक फाइल।
Nieves मुनोज, भल्लाडोलिड र पेशा बाट एक नर्स, सधैं साहित्य संग सम्बन्धित छ, कथाहरु, स्तम्भकार वा साहित्यिक पत्रिकाहरुमा सहयोगी को एक लेखक को रूप मा। संग मौन लडाईहरु उपन्यासमा उफ्रिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाइँको समय, दया र समर्पण यो अन्तर्वार्ता जहाँ उनी उनको र धेरै अन्य विषयहरु को बारे मा कुरा गर्छन्।
Nieves मुनोज - साक्षात्कार
साहित्यिक वर्तमान: तपाइँको उपन्यास शीर्षक छ मौन लडाईहरु। तपाइँ हामीलाई यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ र विचार कहाँ बाट आयो?
निभ्स मुनोज: त्यहाँ एक छ शीर्षक को बारे मा किस्सा। एडासाका सम्पादक डेनियल फर्नांडीज, मेरो सम्पादक पेनेलोप एसेरोलाई टिप्पणी गर्नुभयो हामीले यसलाई किन परिवर्तन गरेनौं? मौन लडाईहरु, जो राम्रो थियो, र दुबै हामी अस्वीकार गर्छौं किनकि यसले पूर्णतया अर्थ परिवर्तन गर्दछ। ती लडाईहरु होइनन् जो चुपचाप लडिन्छन् (जो त्यहाँ पनि छन्), तर ती जो केहि कारणका लागि मौन छन्। र त्यो उपन्यास को मूल हो।
एकातिर, त्यहाँ ती छन् आन्तरिक युद्धहरू कि एक सीमा रेखा स्थिति मा उनीहरु एक अर्का संग लड्न र गिनती छैन। म विश्वस्त छु (र मँ यो तरीका देखाउँछु) कि मानिसहरु सबै भन्दा राम्रो र नराम्रो गर्न सक्षम छन् जब उनीहरुको अस्तित्व खतरामा छ।
र अर्कोतिर, त्यहाँ लडाईहरु छन् जुन इतिहास को किताबहरुमा कहिल्यै भनिएको छैन, जस्तै मेरो उपन्यास मा हुन्छ, प्रथम विश्व युद्ध मा भाग लिने महिलाहरुको दृष्टि र अनुभवहरु। सबै कुरा खाडल हैन, लडाई हरेक कुनामा पुग्यो।
मूल विचार एक लेख्न को लागी थियो पहिलो पेशेवर नर्सहरुलाई श्रद्धांजलि जो प्रतियोगिता मा भाग लिनुभयो। उनीहरु को बारे मा जानकारी को लागी म आए मैरी क्यूरी र एक स्वयंसेवक नर्स र रेडियोलोजी सर्जन को लागी एक शिक्षक को रूप मा उनको सहभागिता। यो त्यो हो जसले हात बाट एक क्षेत्र अस्पताल र यसको अनुभवहरु लाई जान्न को लागी पाठक को नेतृत्व गर्दछ, र साँचो नायक, साधारण महिलाहरु, नर्सहरु, स्वयंसेवकहरु, किसान महिलाहरु र एक वेश्या को प्रवेश को जन्म दिन्छ। क हो कोरल उपन्यास, त्यसैले बिभिन्न भूखंडहरु कथा को दोस्रो आधा मा एक एकल मा एक साथ आउँछ।
NM: म एक प्रारम्भिक पाठक थिएँ, तर मलाई याद गर्ने पहिलो हलिस्टर संग्रह बाट थिए, जुन मैले ती सबै पढें। त्यहाँ बाट म गएँ पाँच, सात रहस्य, तीन अन्वेषकहरु, को संग्रह स्टीमबोट… म यो अन्तिम एक विशेष स्नेह संग याद छ Scarecrow को छोरी y तार पछाडि.
मसँग एउटा ... छ मेरो पहिलो कथाहरु मध्ये एक को bittersweet सम्झना। मैले स्कूल को लागी एउटा कथा लेखेको थिएँ, एक शिकारी को बारे मा एक कल्पना जो एक हिरण लाई गोली हान्यो र वन परी शिकारी लाई एक हिरण मा परिणत गरीयो ताकि उसले गरेको नोक्सानी लाई महसुस गरोस्। शिक्षकले मलाई सोध्नुभयो कि के उनीहरुले मलाई मद्दत गरे र मैले जवाफ दिएन। म सारा दिन कोट र्याक को सामना गरिरहेको थिएँ, झुट बोल्ने को लागी दण्डित।
NM: वास्तवमा, छैन एक प्रमुख लेखक। म सबै subgenres को पढ्छु र यो तरीकाले गाह्रो छ। तर म नाम दिनेछु मेरो केहि सन्दर्भ.
- कल्पना मा, टोलकिएनअवश्य, तर पनि एन्डे वा अझ पछिल्लो चीन Miéville.
-विज्ञान कथा, उर्सुला के ले गुइन र मार्गरेट एटवुड उनीहरु शानदार छन्।
OrHorror, म साँच्चै एक स्पेनिश लेखक मनपर्छ, डेभिड जासो। र त्यसपछि क्लासिक्स, पो वा बाट केटा मौपासन्ट.
एक ऐतिहासिक उपन्यास मा, अमीन मालोफ, मिका वाल्टारी, नूह गोर्डन, तोटि मार्टिनेज डे लेजी o Irisarri का स्वर्गदूतहरु।
समकालीन उपन्यास, Sándor Marai, डोना टारमेरो एक समकालीन को लागी अझै सम्म राम्रो संग परिचित छैन तर को बारे मा कुरा गर्न को लागी धेरै दिनेछ: एन्टोनियो Tocornal.
Crime अपराध उपन्यास को बारे मा, म लिन्छु स्टिग लार्सन, डेनिस लेहान y जोन कोनोली.
Nd र संग रोमान्टिक पाउलिना सिमन्स y डायना गाबाल्डन.
NM: कस्तो गाह्रो प्रश्न। म पुरानो याद को लागी शूट गर्न जाँदैछु। म किताबहरु पढ्छु अना डी लास तेजस वर्डेस किशोरावस्था मा र समय समय मा, खैरो दिन मा, म तिनीहरूलाई फेरि पढ्छु। उनीहरु मलाई शान्त बनाउँछन्। त्यसैले म राख्छु आना शर्ली.
NM: म हुँ अफ रोड लेखक बल द्वारा, किनकि यदि मँ लेख्न को लागी कुनै ठाउँ र समय को फाइदा उठाउँदिन, मँ केहि पनी समाप्त गर्न सक्दिन। मात्र कुरा यो हो कि म tinnitus बाट पीडित छु (म एक निरन्तर आवाज सुन्छु) र म चुपचाप लेख्न मन पराउँदिन किनकि यसले मलाई परेशान गर्दछ। तेसैले म टिभी, संगीत, वा यदि म बाहिर छु, सडक बाट परिवेश को आवाज मा राख्छु।
NM: मूलतः अघिल्लो प्रश्न मा जस्तै, जब उनीहरु मलाई छोड्छन् र म ल्यापटप लिन सक्छु, कहीं र कुनै पनि समय.
NM: मैले यो प्रश्नको अनुमान गरेको छु। मलाई परिवर्तन गर्न मन पर्छ विधा को पठन को, अन्यथा म पढ्न को बोर हुनेछ।
NM: मसँग छु टोलेटम, de Mireia Giménez Himón समाप्त गरे पछि पुनर्जीवित, मेरो साथी बाट विक echegoyen। पहिलो १ th औं शताब्दी मा टोलेडो मा एक साहसिक सेट छ र दोस्रो १1755५५ को लिस्बन भूकम्प को समयमा घटनाहरु बताउँछ।
Justo भर्खर मेरो दोस्रो उपन्यास को पहिलो मस्यौदा समाप्त भयो, जो पहिले नै मेरो सम्पादक को हात मा छ, त्यसैले म लेखन बाट केहि दिन छुट्टी लिन्छु, किनकि प्रक्रिया तीव्र भएको छ।
NM: म भर्खरै यो संसारमा आएको छु र मलाई थाहा छैन यदि म केहि मा टिप्पणी गर्न सक्छु। यो मलाई लाग्छ कि त्यहाँ एक छ सम्पादकीय समाचार र धेरै बिक्री को क्रूर प्रस्ताव। एक समय को लागी एक उपन्यास मा रुचि रहनु यति धेरै प्रकाशनहरु संग गाह्रो छ। अर्कोतर्फ, चोरी को समस्या यो एक अनसुलझी प्रकोप हो। एक राम्रो उपन्यास लेख्न मा संलग्न काम संग, यो एक दया छ कि यो उचित मूल्य छैन।
मैले कुनै पनी अपेक्षा बिना पांडुलिपि पठाइदिए, तथ्य यो हो कि मैले ५४० पृष्ठको उपन्यास लेख्न समाप्त गरिसकेको थिएँ पहिले नै मेरो लागी एक उपलब्धि थियो। त्यसोभए पछि आउने सबै कुरा अद्भुत भएको छ, विशेष गरी पाठकहरु को राय जो पात्रहरु र उनको कथाहरु लाई समर्थन गरेका छन्। मँ संसारको कुनैपनि चीजको लागी यो परिवर्तन गर्दिन।
NM: मँ सधैं हरेक अनुभव बाट केहि पाउँछु, पनी सबैभन्दा कठिन। म रोग, मृत्यु र त्रासदी संग दैनिक बाँच्न। र पनी कठिन परिस्थितिहरु सुन्दर कथाहरु बाहिर आउँछन्। यो संगत मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ अरु संग के मा संलग्न हुनु हुन्छ, तपाइँ आफैं बाट के योगदान गर्नुहुन्छ। जसरी मैले अन्तर्वार्ता को शुरुआत मा भने, हामी मध्ये प्रत्येक राम्रो र नराम्रो गर्न को लागी सक्षम छ, म सधैं राम्रो को लागी हेर्न को लागी कोशिश गर्दछु।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » Nieves Muñoz। मौन लडाईहरु को लेखक संग साक्षात्कार